Famolavolana famolavolana - fanoloran-tena handroso amin'ny BIM amin'ny alàlan'ny Digital Twins - Geofumadas
Ny kambana nomerika "Evergreen" dia manitatra ny hasin'ny asan'ny injeniera amin'ny fotodrafitrasa ary ny fampiharana modely sy ny simulation Open Bentley mandritra ny androm-piainan'ny fananana
Bentley Systems, Incorporated, mpamatsy rindrambaiko manerantany sy serivisy rahona ho an'ny zaza kambana nomerika handrosoana ny famolavolana fotodrafitrasa, ny fananganana ary ny asany, androany dia nanambara ny fanampim-panazavana sy ny fanavaozana ny fampiharana modely misokatra sy ny simulation hampandroso ny injeniera. kambana nomerika manerana ny androm-piainan'ny fananana rehetra. Ny fisokafan'i Bentley misokatra dia manohana ny fizotran'ny asa aman-draharaha nomerika miasa sy miverimberina ary mandeha ho azy izay mamaky fifehezana matihanina mifandraika amin'ny fotodrafitrasa maro. Ankehitriny miaraka amin'ny serivisy rahona vaovao ho an'ny zaza kambana nomerika, ny lanjan'orinasa sy ny fahalalana-dia mitatra mandritra ny dingana fananganana sy fiasa amin'ny fananana foto-drafitrasa iray.
«Ny fanekena malalaka ny BIM dia nahazo tombony betsaka amin'ny matihanina sy ny tetikasan'ny AEC tao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa, fa ankehitriny, miaraka amin'ny serivisy rahona, ny fanaovana ny modely sy ny fandalinana mialoha dia afaka mandroso ao amin'ny BIM isika amin'ny alàlan'ny kambana nomerika. »Hoy i Santanu Das, filoha lefitra zokiolona amin'ny famolavolana ny famolavolana ao Bentley. "Mandraka ankehitriny, ny fampiasana BIM dia voafetra amin'ny fanaterana static, izay, taorian'ny nanaterana azy tamin'ny fananganana, dia lany andro haingana, ka very ny sanda fanampiny amin'ny angon-draharahan'ny injeniera voafatotra ireo modely BIM. Ankehitriny, miaraka amin'ireo kambana nomerika. , afaka manokatra angon-drakitra injeniera isika amin'ny modely BIM miaraka amin'ny singa nomerika mpizara azy ho fanombohana, fanavaozana hatrany ny tontolon'ny dizitaly miaraka amin'ny fanekena drone sy ny fanaovana modely - ary eo no lasa tena mampientam-po -, manohiza modely sy manao simulate hajaina ho an'ny fananana mandritra ny fandaharam-potoanan'ny nomerika ny tsingerin'ny fiainany. Farany, ny lanjan'ny angon-draharahan'ny injeniera amin'ny modely BIM dia azo ampitarina mihoatra ny famindrana amin'ny fananganana sy ny famindrana any amin'ny fandidiana, hiantohana sy hanatsarana ny fanatanterahana ny tetik'asa sy ny fananana. Advance BIM mankany 4D amin'ny alàlan'ny kambana nomerika Evergreen dia midika fa ny maodely endrika sy ny simulation dia afaka manome tanjona lehibe kokoa noho ny mpamokatra tetikasa, ho toy ny ADN nomerika amin'ny fananana velona!
Ny serivisy vaovao ao amin'ny rahona digital twins ho an'ny famoronana endrika
Ny tolotra fampidirana an'i Bentley amin'ny alàlan'ny famolavolana an'i Bentley dia miainga avy amin'ny fampiharana desktop ho an'ny serivisy rahona, manome ny fikambanana ny fahafaha-mamorona, sary an-tsaina ao amin'ny 4D ary hamakafaka ireo kambana niomerika ny fananana fotodrafitrasa. Ny serivisy ITwin dia mamela ny mpandrindra fampahalalana nomerika hametraka ny angon-drakitra injeniera noforonin'ny fitaovana famolavolana isan-karazany ho kambana dizitaly velona, ​​hanampy data misy ifandraisany ary hampifanaraka azy ireo amin'ny fanaovana modely misy azy, tsy hanelingelina ny fitaovana na ny fombany ankehitriny.
iTwin Design Review Manamora ny fizarana famerenana famolavolana haingana. Izany dia mamela ny matihanina hanangana famerenana ho an'ny famoronana ad hoc amin'ny tontolo 2D / 3D hibrida, ary koa ny ekipa tetikasa miasa amin'ny kambana niomerika mba hanatanterahana ny famolavolana drafitra sy ny fandrindrana ny famoronana multidisipliplinary. Manome làlana izy:
(ho an'ny matihanina) hanamarihana sy hanome hevitra mivantana momba ireo singa maodely 3D ary mifindra eo anelanelan'ny fomba fijery 2D sy 3D nefa tsy miala amin'ny tontolo 3D
(ho an'ny tetikasa mampiasa ProjectWise) mba hanitarana ny kambana niomerika nomerika 4D: alaivo ny fiovan'ny injeniera eo amin'ny fikaonan'ny tetikasa ary omeo an-tsoratra tompon'andraikitra momba ny nanova ny inona sy oviana
iTwin OpenPlant, ity serivisy ity dia manome ny mpampiasa OpenPlant amin'ny tontolo hiasa mizara sy ny fanondroan-dàlana an-tsoratra eo anelanelan'ny fisolo tena amin'ny 2D sy 3D amin'ny singa nomerika an'ny zavamaniry.
Ny fampiharana modelling misokatra sy fampiharana fampiharana simulation Open
Ny fizarana singa sy fampifandraisana làlan-tsofina eo anelanelan'ny fifehezana no fototry ny tontolo modely misokatra. Ny composaly injeniera sy ny BIM miorina amin'ny MicroStation manokana ho an'ny karazana fananana sy vahaolana, ny tontolon'ny modely misokatra ho an'ny Bentley dia mampiroborobo ny fiaraha-miasa, fanamorana ny famaha olana ary ny famokarana ireo entona maro an'isa amin'ny fampiharana rehetra.
Ny fampandrosoana ny rindranasan'izy ireo amin'ny sehatra MicroStation dia manome antoka ny fidirana anaty, ny fidirana amin'ny tontolo data mifandray ary ny serivisy nomerika toa ny Component Center ho an'ny tranomboky iraisana sy ny GenerativeComponents ho an'ny fahaiza-manaon'ny famoronana. Ankoatr'izay, ny famakafakana sy ny simulation ny injeniera mitambatra dia mamela ny mpamorona hanova ny toe-javatra isan-karazany mba hahatratrarana vahaolana mety indrindra, tsy ho an'ny famolavolana voalohany, fa ho an'ny fidirana sy ny fanatsarana renivohitra ho an'ny fananana fotodrafitrasa.
Sokafy ny fanavaozana ny fampiharana modelling
(New) OpenWindPower dia manolotra fifaneraserana eo anelanelan'ny rindranasa rindranasa sy ny fizahana geôtika, strukture ary fikajiana, fikojakojana ny lakan-tsolika ary fifanakalozana fifanakalozana eo anelanelan'ny foto-pifehezana, mba hanalefahana ny loza amin'ny famolavolana sy ny fampiharana ny toeram-pambolena sy ny onjan-drivotra any ivelany. Ny OpenWindPower dia manome modely amin'ny turbine rivotra amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny toe-javatra famolavolana, manao famakafakana, manalefaka ny risika ary hiteraka fampahafantarana ny zava-bitany antenaina.
"Ny ShortWindPower dia manafoana ny tsingerin'ny famolavolana ankapobeny ary mamaha ny olana amin'ny sisin'ny famolavolana lehibe, ary mampihena ny vidin'ny fampandrosoana ny herin'ny rivotra eo amoron-dranomasina", hoy i Dr. Bin Wang, filoha lefitry ny injeniera lefon'ny Ivotoerana fikarohana momba ny fikarohana vaovao. Angovo, POWERCHINA Huadong Engineering.
(Vaovao) OpenTower dia fampiharana iray natao manokana ho an'ny famolavolana, tahirin-kevitra ary famokarana tilikambo serasera vaovao, ary koa ho fanadihadianana haingana ny tilikambo fifandraisan-davitra efa misy ho an'ny tompon'ny tilikambo, mpanoro hevitra ary mpandraharaha izay mila fanavaozana hatrany ny fitaovana. Ny fampidirana OpenTower dia tanterahina amin'ny famoahana ny 5G manaraka.
“Noho ny fanampian'ny fampiharana Bentley, mora kokoa sy haingana kokoa ny famolavolana sy ny famakafakana ireo tilikambo. Manome fahafaham-po, fahatokisan-tena sy fiadanan-tsaina ho an'ny mpanjifanay ary hanatsara ny filaminan'ny besinimaro izany, ”hoy i Frederick L. Cruz, filoham-pirenena sy CEO an'ny FL Cruz Engineering Consulting.
OpenBuildings Station Designer ankehitriny dia ny LEGION ary manatsara ny kalitaon'ny famolavolana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fiasa mahomby amin'ny sehatry ny tranoben'ny tranobe sy ny lalan'ny fitsangatsanganana.
OpenSite Designer Izy io dia ahitana ny fahaiza-miaina ao, manohana ny famoronana sy ny famolavolana ireo trano fonenana, ny fanasokajiana ireo sisan-javatra, ary ny fananganana plôtialy.
OpenBridge Designer manambatra ny OpenBridge Modeler amin'ny famakafakana sy ny endrika endri-pianarana LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge Steel ary RM Bridge Advanced.
OpenRoads SignCAD Ny fanavaozana OpenRoads hanaovana fanatanterahana ny marika 3D famantarana amin'ny alàlan'ny famolavolana lalana vaovao na efa misy.
Sokafy ny fanavaozana ny fampiharana simulation
(New) Bentley Systems dia nanambara ny fahazoana Citilabs, ahafahan'ny simba CUBE misy azy tsy azo tsapain-tanana amin'ny OpenRoads.
Ny fampiharana geoteknika PLAXIS sy SoilVision dia mamela ny injeniera hanatanteraka fomba famakafakana marobe, na inona na inona singa voafaritra ao aminy na voafetra ihany izy ireo. Ny fifandraisan-davitra vaovao miaraka amin'ny RAM, STAAD ary OpenGround dia manatsara ny kalitaon'ny vahaolana geostructural feno ho an'ny famolavolana sy famakafakana ny tany, ny vatolampy ary ireo rafitra mifandraika amin'izany.
Ny fiaraha-miasa amin'ny dizitaly ho an'ny Fampiorenana ny Design
(Miaraka amin'ny Siemens) Bentley OpenRoads dia hanararaotra Aimsun avy any Siemens ho fanodinana ny fifamoivoizana amin'ny haavo micro.
(Miaraka amin'ny Siemens) Ny mpamorona fiaramanidina OpenRail manaraka dia mampiditra ny OpenRail Designer sy ny Siemens SICAT Master.
(Miaraka amin'ny Siemens) OpenRail-Entegro Train Simulator dia mampifangaro an'i Siemens Entegro sy Simulation Control Train Train miaraka amin'ny Bextley ContextCapture, OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer ary LumenRT, ho an'ny asa amin'ny Digital kambana.
Previous Post«Previous Vaovao Geo-Engineering - Taona amin'ny fotodrafitrasa - YII2019
Next Post «EthicalGEO» - ny filàna hijerena ireo loza mety hitranga amin'ny fironana ara-jeografiamanaraka »